dimanche, 09 mai 2021 15:19
Efa ho herinandro izao no velo-tebiteby ireo manam-pahaizana sinoa sy ireo mpiatsehatra firenen-kafa miaro ny habakabaka. Nampiakatra singa voalohany amin'ny zanabolana azo hipetrahana, Module Tianhe, eny amin'ny 450km miala ny tany ny Sinoa ny 29 aprily lasa teo. Ny fusée Longue-Marche 5B no nitondra izany singa voalohany amin'ny zanabolana azo hipetrahana izany. Tafapetraka soa aman-tsara amin'ny lalana tokony hipetrahany ilay zanabolana, ary tokony hiverina ety an-tany hilatsaka amin'ny faritra efa voahomana amin'izany kosa ilay sambondanitra, tsy misy mpanamory ao anatiny, nanosika sy nitondra ity zanabolana ity. Nisy tsy fahatomombanana anefa izay fiverenana tety an-tany izay, ka dia nilatsaka tsy nisy azo natao tamin'ity potika sambondanitra milanja 19.80taonina ary mirefy 33.20m ny halavany ary 5m ny sakany. Nirimorimo eo amin'ny 28 000km/h ny hafangainam-pandehany hiditra ny atmosferan'ny tany. Samy efa nihatrana ny fitaovam-piadiana amotehana ity sambondanitra ity ho an'ireo firenen-dehibe, sao milatsaka ao amin'ny taniny.
dimanche, 09 mai 2021 12:40
Nosy Be : Misitraka ny fandaharanasa trano fonenana
Nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian nandritra ny diany tao Nosy Be ny sabotsy 8 may 2021 fa hampidirina ao anatin’ny “Programme logements sociaux” ity tanàna ity, ary rehefa izany dia hisitraka trano ireo vahoaka. Mijaly amin’ny resaka trano i Nosy Be, hoy ny praiminisitra, ary tsy mba nisy fikasàna fanaovan-trano avy amin’ny fitondrana hatrizay, ka izay no hampidirina ao anatin’ity fandaharanasa ity. Efa mandeha ny asa fanorenana amin’izao fotoana izao, ary misy koa fanorenana fotodrafitrasa hafa toy ny kianja filalaovana manara-penitra sy ny lalana.
vendredi, 07 mai 2021 12:26
Raharaha volamena 73,5kg : Hanomboka anio ny fahadihadiana lalina ireo voarohirohy eto
Mivoatra ny raharaha volamena 73,5kg, nisy nanondrana an-tsokosoko ka tratra tatsy Johannesburg Afrika Atsimo ny 31 desambra 2020. Hiatrika fanadihadiana lalina etsy amin’ny Pôle anti-corruption 67ha anio ireo mpanamory roalahy, nitondra ny fiaramanidin’ny orinasa STA, nitondrana ny entana tamin’io, toy izany koa ny Sekretera jeneralin’ny Aviation Civile de Madagascar na ACM. Hitohy amin’ny talata ho avy ny fanadihadiana ny sasany. 13 mianadahy hatreto no voaroirohy tamin’ity raharaha ity no tazomina am-ponja vonjimaika, ka any Tsiafahy ny 12 ary ao Antanimora ny iray, vehivavy.
vendredi, 07 mai 2021 08:47
Antsirabe : Fikomiana sy fikasana handroba fananam-bahoaka naharatrana zandary sy polisy
Nitrangana fikomiana tao Antsirabe ny alin'ny 06 may 2021. Ny fanoherana ny fepetra noraisin'ny fiadidiana ny faritra no niatombohany saingy nivadika fikasana handroba fananam-bahoaka, indrindra fa ireo fotodrafitr'asa entina hamonjena ain'olona no kasaina potehina. Nanao ny asany ny mpitandro filaminana ary voafehy ny asan'ny olon-dratsy. Tsy vaky ny CTC 19. Tsy tafiditra tao anatiny mihitsy ireo andian-jatovo izay niandahy niambavy, na saika hanao amboletra aza. Ny fitaratra no voatorabato. Ny oniversite vao namboarina koa dia tsy nisy fahasimbana ny trano. Fa ny fanitso namefena ny toerana no rava amin'ny antsasany, ary ny hazo avy nampiasaina no nodoran'ireo zatovo.
jeudi, 06 mai 2021 19:58
Raharaha volamena 73,5kg : Nolavin’ny Fitsarana ao Kempton Park ny fangatahana fahafahana vonjy maika arahina antoka nataon’izy telo lahy
Mitohy hatrany ny fifampiraharahana amin’ny Fanjakana Afrika Atsimo sy ny Fanjakana Malagasy amin’ny fampodiana eto Madagasikara ireo volamena 73,5 kilao voatazona any Afrika Atsimo, sy ireo telo lahy nanondrana azy an-tsokosoko, amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Raharam-bahiny izay miara-miasa akaiky amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Ministeran’ny Harena an-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika. Tamin’ny fotoam-pitsarana ny 4 Mey 2021 dia nolavin’ny Fitsarana Afrika Atsimo ao Kempton Park ny fangatahana fahafahana vonjy maika arahina antoka (demande de liberté sous caution) nataon’izy telo lahy, araka ny didy izay nivoaka tamin’io andro io. Didy farany nivoaka io taorian’ireo fanemorana maro nifanesy voalaza tamin’ny fanambarana tany aloha. Ny anton’izany fandavana izany dia noho ny fisian’ny fangatahan’ny Fanjakana Malagasy ny hampodiana azy telo lahy ireo, izay efa eo andalam-pandinihana eo anivon’ny Fanjakana Afrika atsimo, eo ihany koa ny vesatry ny heloka iampangana azy ireo aty Madagasikara, sy ny fahatsapan’ny Fitsarana fa tsy azo ametraham-pitokisana izy ireo ka ahiana mafy ny handosirany hivoaka ny sisintanin’i Afrika Atsimo raha omena fahafahana vonjy maika, ary farany dia noho ny fahatsapan’ny Fitsarana fa manohintohina ny filaminana anatiny ny heloka iampangana azy ireo.
mercredi, 05 mai 2021 18:19
Famonoana dokotera tany Amboangibe Sambava : Naiditra am-ponja ao Antalaha ireo olona 6 voarohirohy
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Antalaha ireo olona miisa 6 nahiana ho nahavita ny heloka bevava nahafaty Dokotera lahy iray niasa tany Amboangibe. Raha tsiahivina fohy dia ny 21 aprily 2021 no nisy namono ilay Dokotera tao Amboangibe, Distrika Sambava. Natao ny fikarohana izay nahavanon-doza ka nisy ireo voasambotra. Niteraka savorovoro ny mbola fitazonana ireo voarohirohy satria nangatahan'ireo mponina hanaovana fitsaram-bahoaka ny 24 aprily. Niravona ihany anefa izany olana izany taty aoriana rehefa nandray andraikitra ireo solontenam-panjakana.
mercredi, 05 mai 2021 18:18
Antalaha : Vehivavy iray hatolotra Fitsarana lasa nandositra
Vehivavy iray tokony handalo fampanoavana any Antalaha no nandositra tao amin’ny borigadin’ny zandary omaly talata maraina. Tsy fantatra na vokatry ny firaisana tsikombakomba na kolikoly na baiko midina na tandrevaka na tsy fahaizana miasa no nahatonga izany. Tena nisy ilay fandosirana ary efa misokatra ny fanadihadiana mikasika io tranga iray io, araka ny vaovao azo tamin’ny seraseran’ny Zandarimaria. Ny vokatr’io fanadihadihana io no hamaritra ny antony nahafahan’ilay vehivavy nandositra ny borigady. Anisan’ny voasaringotra tamin’ny fahafatesan’ilay mpitsabo voatetik’antsy tany Amboahangibe Sambava ny 21 aprily teo io vehivavy.
mercredi, 05 mai 2021 08:09
Hamehana ara-pahasalamana : Hiverina an-tsekoly ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana
Miverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinam-panjakana manerana ny Nosy, manomboka anio alarobia 05 May 2021 voakasik’izany ireo faritra mikatona (Analamanga, Atsinanana, SAVA, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Anôsy) sy ireo faritra hafa. Ho an’ireo faritra izay mbola tsy voakasiky ny fikatonana kosa dia miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra. Ho an’ny Analamanga, hafindra eny amin’ny EPP Analamahitsy ireo ankizy kilasim-panadinana ao amin’ny EPP-CEG Soamandrakizay izay mbola andraisana mararin’ny Covid-19.